Arday wax ka barata Dugsi Sare magaalada Leiden ee Netherlands ayaa shaqo guri loo siiyey… – Hagaag.com
Posted on 22 Nofeembar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Dugsi Sare oo ku yaal magaalada Leiden dalka Netherlands, ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay ku tilmaamida diinta Islaamka inay tahay “diinta rabshadaha”, kadib markii mowjado caro ahi ay qabsadeen baraha bulshada.
Sawiro laga qaaday su’aalo ku saabsan Diinta Islaamka ayaa lagu daabacay baraha bulshada, kuwaas oo lagu soo daray qeyb ka mid ah shaqo guri ahaan loo siiyey ardayda oo cinwaankeedu yahay “Xoriyada Diinta iyo Islaamka” maalmo ka hor iskuulka “Visser’t Hooft”, taasi oo kicisay carada jaaliyada Muslimiinta ah.
Sawirada waxaa ka muuqday su’aalo ay ka mid yihiin “Maxay dadku u aaminaan diin soo saarta rabshadahan oo dhan?” Maxayse u jiraan argagixiso badan oo Muslimiin ah?
Ka dib markii bulshada Muslimiinta ah ay ka dhiidhiyeen su’aalahan, Iskuulku wuxuu soo saaray bayaan shalay oo Sabti aheyd, kaas oo uu ku cadeeyay inuusan ku raacsanayn qaar ka mid ah su’aalaha lagu sheegay shaqada guriga.
“Waa inaan is ixtiraamnaa, ayada oo aan loo eegin asalka iyo diinta,” ayay tiri, “waxaana muujineynaa sida aan uga xunahay in dadka waxyeello kasoo gaarto shaqadda guriga ee iskuulka dartiis.”
Warbaahinta maxalliga ahina waxay tabisay in arday Muslim ah, intii uu ku guda jiray shaqadiisa casharka, uu akhriyay su’aalaha isla markaana uu murugo darteed uga baxay fasalka.